ကျနော်တို့ခင်ဗျားတို့နဲ့ ၀မ်းတစ်ထွာအရေး……………………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » ကျနော်တို့ခင်ဗျားတို့နဲ့ ၀မ်းတစ်ထွာအရေး…………………….
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 6, 2012 in Events/Fundraise, Photography | 19 comments
1 လေးစားစရာကောင်းသော (ကျောင်းမသွားခင် အမေ့ကိုကူတာပါတဲ့)
2 ရသောနေရာမှာရသလို ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမူ့နဲ့ပျော်မွှေ့ပါတယ်။
3 ညည်းရော ဈေးဦးပေါက်ပြီလားအေ့ရယ်4 ဒီကားကြားလေးက ခရီးသည်အတက်အဆင်း ကားမထွက်ခင်ရောင်းရတယ်လေ
5 မြန်မာပြည်အခြေအနေရ လူအင်အားသုံးရဆဲ့ပါဘဲ (လမ်းခင်းလုပ်သားတွေပေါ့)
6 ဦးပိန်တံတားပေါ်က ငှက်သည် (ဒီထဲမှာရွာသားတစ်ယောက်ပုံပါတယ်)
8 မင်းကွန်းအပြန် လှေပေါ်ပစ္စည်းတင်နေကြတာ
9 မင်းကွန်း တိနိဆိပ်ကမ်းမှာ ရေထဲက ဆယ်လာတဲ့သစ်ကို ဆွဲတင်နေကြတာပါ
11 85လမ်း 29လမ်း စည်ကားတဲ့မန်းလေးရဲ့ သစ်သီးလက်ကားဈေးတန်း
12 လမ်းးအလည်ခေါင်မှာဈေး ဆိုင်တည်
15 နံနက်စောစော သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာလေ
16 မန်းလေး မြစ်ဆိပ်က ပန်းဖောက်သည်ပေးသူတွေလေ
ကျနော်က ချမ်းသာအသိုင်းအ၀ိုင်းက ပေါက်ဖွားလာတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။
အဲတော့ကျနော်ငယ်စဉ်ကတည်းက နေထိုင်ရာ ပါတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက အလုပ်နဲ့လက်နဲ့
ပုလင်းခွံ အိတ်ခွံ သတင်းစာအဟောင်းတွေဝယ်တဲ့သူ.။
ငယ်ကတည်းက ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အဲတော့ အခုအချိန်ရောက်လေရာရာမှာ လူတွေရဲ့ ၀မ်းတစ်ထွာကို ဖြည်တင်းဘို့ အလုပ်လုပ်
Whatever, i support that your photos are very nice and next time, i hope you can take more pictures than now. I prefer natural views, like Sagaing Mountain & Mandalay Hill.
မာမီပင်ပင်ပန်းပန်း ပါးစပ်လှုပ်မှ ပါးစပ်စားရအောင်
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ဆွမ်းဘုန်းပေးပြီးတဲ့အခါ ဗိုက်ပြည့်သွားတော့
“ဒီလို ဒုက္ခမျိုးတော့ တပည့်တော်လဲလိုချင်ပါ့ဘုရား”လို့လျှောက်ပါသတဲ့။
“ဒို့များလည်းအရိပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ နေချင်ပါရဲ့”လို့ဖြစ်နေအုံးမယ်နော် မာမီရေ။
လေးပေါက်ရယ် ဘ၀ဆိုတာတိုက်ပွဲတဲ့ ခယ်မဆိုတာလိုက်ပွဲတဲ့ အဟဲ နောက်တာ…. လေးပေါက်က ဒီပုံလေးတွေတင်တော့ တစ်နေ့ညက မီးမီးသွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Capital, Gandarmar Whole sale တို့လို နေရာမျိုးမှာ ၀ယ်နေတဲ့လူတွေကို မီးမီးမြင်ခဲ့တယ် အော်လူတွေများ ရှိတဲ့လူများကြတော့ ၀ယ်လိုက်ကြ တာ ဘယ်လိုများချမ်းသာနေကြသလဲပေ့ါ…အခုလေးပေါက်တင်တဲ့ ပို့စ်ရဲ့နောက်ဆွဲတွဲအနေနဲ့တောင် တင်ပ လိုက်ချင်တယ်…..အဟိ
၀မ်းတစ်ထွာအတွက် ရိုးရိုးသားသား ရှာဖွေစားသောက်နေသူများ အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုပါ၏ ….
တကယ်လက်တွေ့ ဘ၀မှာ ကျနော်တို့လိုသာမန်လူတန်းစားတွေ
အခြေခံလူတန်းစားတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ရတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့
အကြီးအကဲတွေအုပ်ချုပ်သူတွေကို ပကတိအတိုင်း အမှန်အတိုင်းသိစေမြင်စေ ကြားစေချင်ပါတယ်။
တကယ်အပြင်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရပုံတွေ ဖြစ်နေတာတွေကို သူတို့ မသိကြပါဘူး။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူတို့ ဒီဓါတ်ပုံထဲက ပုံမျိုးတွေမမြင်ဘူးပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ဒီနေရာကို ဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင် ဒီဈေးသယ်တွေကို ရှင်းလင်းထားလို့ပါဘဲ။
ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ ဖခင်က သူ့သားတောထွက်မှာစိုးတော့
သူအို သူနာ သူသေ အစရှိတဲ့ ပုံရိပ်တွေမမြင်အောင် ဖုံးကွယ်ပေးထားသလိုမျုိုးပေါ့။
ပြင်ပမှာ တကယ်ဖြစ်နေတာကို မသိတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလဲမှားခဲ့ကြသပေ့ါ။
ကျနော်ရိုက်ပြထားတာတွေကတော့အပြင်လောက က တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀တွေပါဘဲ။.
လေးပေါက် က သဘာဝကို နှစ်သက်သလို တကယ့်ဘ၀တွေကိုလည်း ခံစားတတ်တယ်။
မတူတဲ့ အမြင်ပေါ့။ ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့သူတွေကို လေးစားပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကျောမပူပေမဲ့ နားပူခံရတဲ့ လူတွေ လည်း အတော် စိတ်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ် လေးပေါက်။
အသက်နဲ့ ခန္ဓာ ကြီး မြဲနေသရွေ့ ဒီဒုက္ခ ၀န်တွေကို ထမ်းနေရမှာပါ။ လူတိုင်း မလွတ်ပါဘူး။
ဒါနဲ့ လေးပေါက်ကို တိုင်ချက်ဖွင့်ချင်လို့ပါ။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် ကြီး ဖုန်းဆက်ဆက်ပြီး စတတ်နောက်တတ်သော အလကားနေ အလကား ပိုက်ဆံရှိလားသိ မရှိလား သိ မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းတတ်သော အင်မတန် ဇီဇာကြောင်သော ၊ ဂဂျိုးဂဂျောင်နိုင်လှသော ပေါက်တတ်ကရ မဟုတ်မဟပ် အလွန် ပြောတတ်သော ပေစုတ်စုတ်နိုင်လှသော မန်းတလေးမှ နံပါတ် တပ်ပြီးသား လူပြို အပုပ်အသိုးကြီး တယောက်အား အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးပါရန် အနူးအညွှတ် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ။
လေးပေါက်ရေ အရိပ်ထဲမှာနေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေခေါင်းက
Ban That Senceဆိုတဲ့ကားလေးအတိုင်းဆိုရင် ကိုပေါက်ဓါတ်ပုံတွေဆင်ဆာဖြတ်ခံရမယ့်အထဲပါသွား
လေးပေါက်ရေ .. ပုံလေးတွေ အတွက်ကျေးဇူးပါ … ။
မြင်နေ တွေ့နေရပေမယ့် … ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့တော့ … တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့မိဘူး .. လေးပေါက်ကြီး စိတ်ကူးကောင်းတယ် … ။
လေးပေါက်ပြောတဲ့ ၀မ်းတစ်ထွာပြည့်ဖို့အရေး …တကယ်ကို မလွယ်တာပါပဲ …။
အ၀တ်စား ၊ အဆင်ယင် ချို့တဲ့ နွမ်းပါးပေမယ့် …. သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်ကို ရိုးရိုးသားသား မရှက်မကြောက်လုပ်ရဲတာ … လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ် …. ။ ဈေးရောင်းတာ ၊ အမှိုက်ကောက်တာ ဆိုပေမယ့် … တော်ရုံလူ မလုပ်ရဲဘူး .. အဲ့ဒါကိုယ်တွေ့ …. ဟီး
ပြီးခဲ့တဲ့လက … အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်မှာ … အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဈေးရောင်းပွဲတော် တစ်ခုလုပ်တယ် …. ။ ရုံးချိန်တွေမှာပါ နှိပ်စက်တာ အားမရလို့ .. ရုံးပိတ်ရက်ပါ ခေါ်နှိပ်စက်တဲ့ ကကြီးသား ဂျီအမ်ဖြစ်သူရဲ့ … တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် .. ဆိုင်ခန်း နှစ်ခန်းစာယူပြီး .. ရုံးက export ထွက်မရတဲ့ အထည်တွေ .. ထုတ်ရောင်းတယ် … ။ ကိုယ့်လို ဘ၀တူက .. နောက်သုံးယောက်ပါပြီး … စက်ရုံထဲက ပစ္စည်းသယ်တဲ့ လူတွေ လည်း ပါတယ် … ။ ဈေးကလည်း တစ်ခါမှ မရောင်းဖူးတော့ …. ရှိန်သလိုလို ..ဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့လူကို … မ၀ယ်ဝယ်အောင် ..ပြောဆိုပြီးလည်းမရောင်းချင်တော့ … ၀ယ်တဲ့လူလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုက်တာကြည့်ဝယ်သွား .. ပြီးမှ ပိုက်ဆံယူထားလိုက်တယ် … အဲ့ဒီလောက်ပဲ .. ရောင်းဖြစ်ခဲ့တာ … ။ ဈေးမရောင်းတတ်တဲ့ လူတွေချည်းသွားရောင်းတာ … မှတ်မှတ်ရရ … အချိန်ခြောက်နာရီလောက်မှာ ရှစ်သိန်းကျော်ဖိုးရောင်းခဲ့ရတယ် … ။ အထည်တွေကလည်း သူများနိုင်ငံရောက်လျှင် 20$ ကနေ … 50$အထက်အောက်တန်ဖိုးကို …. ကွာလတီ 100%မရောက်တာကြောင့် … ဒီမှာ … 3000 ကျပ်တန်ကနေ .. 8000ကျပ်အတွင်းရောင်းပေးခဲ့တာကြောင့်လည်း .. အ၀ယ်များတာ ပါမယ် … ။
အပြောချိုချိုနဲ့ .. ဈေးသည်ကို … ဆွဲဆောင်ပါ .. ဈေးရောင်းပါဆိုလျှင် … ဒီမျက်နှာကြောတင်းတင်းနဲ့ … ဈေးဦးတောင် ပေါက်မယ် မထင်ဘူး … ။ ဒါကြောင့် …ရိုးရိုးသားသား စီးပွားရှာတဲ့ … ဈေးသည်လေးတွေကိုမြင်လျှင် .. ကျေနပ် အားကျတဲ့ စိတ်တော့ဖြစ်မိတယ် …. ။ :cool:
ပုံတင်မက သူ့အကြောင်းအရာလေးတွေ ဖြစ်နိုင်ရင်
ရေးပြ ရှင်းပြ သင်ပြ ပေးပါလား ခင်ဗျား..
အော် ၀မ်းတစ်ထွာ အရေး တကယ်ကို စိတ်မအေးရပါလား။ ခွန်အားနဲ့ ကျိုးစားရှာနေရတဲ့သူတွေပါလား။ အားပေးလိုက်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်။ ၀မ်းကလဲ တစ်ထွာကြောင့်သာပဲ တစ်တောင်လောက်ဆိုခက်မယ်။
သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာလို့ ဆိုရိုးစကားရှိတာပဲနော်၊ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ၀မ်းတစ်ထွာအရေးအတွက် ကျရာနေရာမှာ ရုံးကန်လှုပ်ရှားရတာပဲနော်၊
မရောင်ခြည်ခရေ မန်းလေးလာမယ်ဆိုလို့ စောင့်လိုက်ရတာ။
ကျနော်က မယ်ပုတို့တောင်ပြောထားတာ လာမှာဆိုပြီး။
လူနဲ့ အလုပ် ..
အလုပ်နဲ့ လူ …
ဒါနဲ့ ဦးပိန်တံတားပေါ်က ငှက်သည်ရဲ့ ရှေ့နားက ကင်မရာဂျီး အောက်ချထားတဲ့လူက ရွာထဲကလူ မီဟုတ်လား လေးပေါက်ရဲ့ …….